ဆက်ဆံရေး တင်းမာနေတဲ့ အီဂျစ် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထံ သာမန်ထက် ထူးခြားတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုး မိုဟာမက်ဆာလား - SPORTS MYANMAR
ဆက်ဆံရေး တင်းမာနေတဲ့ အီဂျစ် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထံ သာမန်ထက် ထူးခြားတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုး မိုဟာမက်ဆာလား
လီဗာပူး စတား မိုဟာမက် ဆာလား က လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် လာရောက် ကစား တဲ့ အခါ သူ့အပေါ် အနှောက် အယှက် ဖြစ်စေမယ့် အရာတွေ လုပ်ဆောင်မှု ကို ရပ်တန့် သွား၇န် တောင်းဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဆာလား နဲ့ အီဂျစ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဆက်ဆံရေး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေ အတွင်း တင်းမာမှု တွေ ရှိနေ ခဲ့ပြီး အသက် ၂၆ နှစ် အရွယ် လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုး က အီဂျစ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ဟာ သူ့ရဲ့ ပုံရိမ် မူပိုင်ခွင့် နဲ့ ပက်သက်တဲ့ စောဒက တက်မှုတွေ ကို လျစ်လျူရှု ထားခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲ ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်ရွေးစင် အသင်း နဲ့ လာရောက် ပူးပေါင်းတဲ့ အခါ မှာ ဆာလား ရဲ့ လုံခြုံရေး နဲ့ ပက်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှု တွေ ရှိနေကာ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုး ရဲ့ ရှေ့နေ ဖြစ်သူ ကတော့ သာမန်ထက် ပိုတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ ပါဝင်တဲ့ စာတွေကို ထုတ်ပြန် ကြေငြာ ခဲ့ပါတယ်။ အကယ်လို့များ ဆာလား ရဲ့ တောင်းဆိုမှု တွေကို ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် က လိုက်လျောမှု မရှိ ခဲ့ပါက ရှေ့နေ ဖြစ်သူ အစ်ဆာက သူ့ အမှုသည်ဟာ လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက် ကစား ပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်း အီဂျစ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဟန်နီ အေဘို ရီဒါ နဲ့ ကျန် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် တွေကို ခြိမ်းခြောက် လိုက်ပါတယ် ။
The Sun ရဲ့ ဖော်ပြချက် အရ ကတော့ အီဂျစ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ international duty တွေ အတွက် ဆာလား ကို လေယာဉ် နဲ့ လာရောက် ခေါ်ဆောင်ရန် နဲ့ international duty ကာလ တစ်လျှောက်လုံး လုံခြုံရေး ၂ ယောက် ထားရှိ ပေးရန် စတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အီဂျစ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ဆားလား နေထိုင်ရာ ဟိုတယ် ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ပရိတ်သတ်တွေ လာရောက် စုရုံး နေမှုကို တားဆီး ပေးရန် ၊ ဖုန်းခေါ်ဆို မှုတွေ ပိတ်ပေးရန် နဲ့ ပရိုမိုးရှင်း ပွဲတွေ မှာ သူ့ကို အတင်း အကျပ် မတက်ခိုင်း ရန် စတာတွေ လည်း ပါဝင် ပါတယ်။
အစ်ဆာ ထုတ်ပြန် ခဲ့တဲ့ စာတစ်စောင် မှာ ဆိုရင်လည်း အီဂျစ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ ဆာလား အပေါ် အပြုအမူ ဟာ ‘ကျက်သရေ မရှိတဲ့ အပြင် စက်ဆုတ် ရွံရှာ စရာ ကောင်းတယ်’ ဆိုတဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောဆိုမှု လည်း ပါဝင် နေပါတယ်။
ယခု တစ်ပတ် အစောပိုင်း မှာ တုန်းက ဆာလား က “ကျွန်တော်တို့ အီဂျစ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ထံ complaint letters တွေ ပေးပို့ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နဲ့ ကျွန်တော့် ရှေ့နေ ရဲ့ စာတွေကို သူတို့က လျစ်လျူ ရှုခဲ့ ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို လုပ်သလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် လည်း မသိ ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ဖို့ သူတို့မှာ အချိန် မရှိ လို့လား ? နိုင်ငံ့ လက်ရွေးစင် ကစားသမား တွေရဲ့ ပြသနာ တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစား ပေးရမှာ ဟာ ဘယ်ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် မဆို လုပ်ပေး ရမယ့် တာဝန် ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နားလည် ထားတဲ့ အရာ နဲ့ အခု ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေ ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
အီဂျစ် ဟာ လာမည့် စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ မှာ နိုင်ဂျာ အသင်း နဲ့ ကစား သွားရဖို့ ရှိနေပြီး အဆိုပါ ပွဲမှာ ဆာလား ပါ မပါ ဆိုတာ ကတော့ သေချာ ရေရာခြင်း မရှိ သေးပါဘူး။ လီဗာပူး အသင်း ဟာ 2018 – 19 ဘောလုံး ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ၃ ပွဲ ကစား ၃ ပွဲ စလုံး အနိုင် ရရှိ ထားခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လိဂ် ရဲ့ ဂိုးသွင်းဘုရင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆာလား ကတော့ ၀က်ဟမ်း ဘရိုက်တန် တို့နဲ့ ပွဲတွေ မှာ ၁ ဂိုးစီ သွင်းယူ ထားပါတယ်။
ဆကျဆံရေး တငျးမာနတေဲ့ အီဂဈြ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျထံ သာမနျထကျ ထူးခွားတဲ့ တောငျးဆိုမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ လီဗာပူး တိုကျစဈမှုး မိုဟာမကျဆာလား
လီဗာပူး စတား မိုဟာမကျ ဆာလား က လကျရှေးစငျ အသငျး အတှကျ လာရောကျ ကစား တဲ့ အခါ သူ့အပျေါ အနှောကျ အယှကျ ဖွဈစမေယျ့ အရာတှေ လုပျဆောငျမှု ကို ရပျတနျ့ သှားရနျ တောငျးဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။ ဆာလား နဲ့ အီဂဈြ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျရဲ့ ဆကျဆံရေး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ လတှေ အတှငျး တငျးမာမှု တှေ ရှိနေ ခဲ့ပွီး အသကျ ၂၆ နှဈ အရှယျ လီဗာပူး တိုကျစဈမှုး က အီဂဈြ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျဟာ သူ့ရဲ့ ပုံရိမျ မူပိုငျခှငျ့ နဲ့ ပကျသကျတဲ့ စောဒက တကျမှုတှေ ကို လဈြလြူရှု ထားခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲ ခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လကျရှေးစငျ အသငျး နဲ့ လာရောကျ ပူးပေါငျးတဲ့ အခါ မှာ ဆာလား ရဲ့ လုံခွုံရေး နဲ့ ပကျသကျပွီး စိုးရိမျမှု တှေ ရှိနကော လီဗာပူး တိုကျစဈမှုး ရဲ့ ရှနေ့ေ ဖွဈသူ ကတော့ သာမနျထကျ ပိုတဲ့ တောငျးဆိုမှုတှေ ပါဝငျတဲ့ စာတှကေို ထုတျပွနျ ကွငွော ခဲ့ပါတယျ။ အကယျလို့မြား ဆာလား ရဲ့ တောငျးဆိုမှု တှကေို ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျ က လိုကျလြောမှု မရှိ ခဲ့ပါက ရှနေ့ေ ဖွဈသူ အဈဆာက သူ့ အမှုသညျဟာ လကျရှေးစငျ အသငျး အတှကျ ကစား ပေးမှာ မဟုတျကွောငျး အီဂဈြ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဋ်ဌ ဖွဈသူ ဟနျနီ အဘေို ရီဒါ နဲ့ ကနျြ ဘုတျအဖှဲ့ဝငျ တှကေို ခွိမျးခွောကျ လိုကျပါတယျ ။
The Sun ရဲ့ ဖျောပွခကျြ အရ ကတော့ အီဂဈြ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျ အနနေဲ့ international duty တှေ အတှကျ ဆာလား ကို လယောဉျ နဲ့ လာရောကျ ချေါဆောငျရနျ နဲ့ international duty ကာလ တဈလြှောကျလုံး လုံခွုံရေး ၂ ယောကျ ထားရှိ ပေးရနျ စတဲ့ ထူးခွားတဲ့ အခကျြတှေ ပါဝငျ ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အီဂဈြ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျ အနနေဲ့ ဆားလား နထေိုငျရာ ဟိုတယျ ပတျဝနျးကငျြ မှာ ပရိတျသတျတှေ လာရောကျ စုရုံး နမှေုကို တားဆီး ပေးရနျ ၊ ဖုနျးချေါဆို မှုတှေ ပိတျပေးရနျ နဲ့ ပရိုမိုးရှငျး ပှဲတှေ မှာ သူ့ကို အတငျး အကပျြ မတကျခိုငျး ရနျ စတာတှေ လညျး ပါဝငျ ပါတယျ။
အဈဆာ ထုတျပွနျ ခဲ့တဲ့ စာတဈစောငျ မှာ ဆိုရငျလညျး အီဂဈြ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျ ရဲ့ ဆာလား အပျေါ အပွုအမူ ဟာ ‘ကကျြသရေ မရှိတဲ့ အပွငျ စကျဆုတျ ရှံရှာ စရာ ကောငျးတယျ’ ဆိုတဲ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ပွောဆိုမှု လညျး ပါဝငျ နပေါတယျ။
ယခု တဈပတျ အစောပိုငျး မှာ တုနျးက ဆာလား က “ကြှနျတျောတို့ အီဂဈြ ဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျ ထံ complaint letters တှေ ပေးပို့ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော နဲ့ ကြှနျတေျာ့ ရှနေ့ေ ရဲ့ စာတှကေို သူတို့က လဈြလြူ ရှုခဲ့ ကွပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဒီလို လုပျသလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျော လညျး မသိ ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စာတှကေို ဖတျဖို့ သူတို့မှာ အခြိနျ မရှိ လို့လား ? နိုငျငံ့ လကျရှေးစငျ ကစားသမား တှရေဲ့ ပွသနာ တှကေို ဖွရှေငျးဖို့ ကွိုးစား ပေးရမှာ ဟာ ဘယျဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျ မဆို လုပျပေး ရမယျ့ တာဝနျ ပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော နားလညျ ထားတဲ့ အရာ နဲ့ အခု ဆနျ့ကငျြဘကျ ဖွဈနေ ပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
အီဂဈြ ဟာ လာမညျ့ စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ မှာ နိုငျဂြာ အသငျး နဲ့ ကစား သှားရဖို့ ရှိနပွေီး အဆိုပါ ပှဲမှာ ဆာလား ပါ မပါ ဆိုတာ ကတော့ သခြော ရရောခွငျး မရှိ သေးပါဘူး။ လီဗာပူး အသငျး ဟာ 2018 – 19 ဘောလုံး ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ ၃ ပှဲ ကစား ၃ ပှဲ စလုံး အနိုငျ ရရှိ ထားခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက လိဂျ ရဲ့ ဂိုးသှငျးဘုရငျ ဖွဈခဲ့တဲ့ ဆာလား ကတော့ ၀ကျဟမျး ဘရိုကျတနျ တို့နဲ့ ပှဲတှေ မှာ ၁ ဂိုးစီ သှငျးယူ ထားပါတယျ။